Jabuuti oo ciidamo Hor leh u soo direysa Somalia, si ay u taageeraan Hawlgalka AMISOM.
Guuto cusub oo Milliteri oo lagu magacaabo Hiil 4 oo ka socda Ciiddanka Jabuuti ayaa ku jira Diyaar-garowgii ugu dambeeyey ee ay ugu soo ambabixi lahaayeen dalka Somalia, si ay uga qeyb galaan Dadaalka Nabadda Somalia ee ay garwadeenka ka yihiin Hawlgalka AMISOM
Wakaalladda Wararka Islaamiga ee IINA News ayaa baahisay inay Ciiddanka cusub soo bedeli lahaa Guutadda Hiil 2 ee Ciiddanka Jabuuti ee ku sugan Gobalka Hiiraan, kuwaasi oo dhamaystay Hawlgalkii ay u joogeen gudaha Somalia.
Taliyaha Milliteriga Jabuuti, Jeneral Zakariya Sheekh Ibraahim ayaa Ciiddanka cusub ee Hiil 4 ku booqday Xeradda Marima ee Jabuuti, wuxuuna kula dardaarmay inay taageero ka geystaan sidii Somalia loogu soo celin lahaa Nabadda iyo Deganaanshaha.
Jeneral Zakariya Sheekh Ibraahim waxa kale oo uu tilmaamay in muhiimadda Ciiddanka cusub loogu soo dirayo Somalia tahay sidii ay Hawlgalka AMISOM ugala qeyb geli lahaayeen Dagaalka ay kula jiraan Xarakadda Alshabaab, waa sida uu hadalka u dhigay.
Dhinaca kale, Wasiirka Difaaca ee Jabuuti, Cali Xasan Bahdoon oo la hadlay Guutadda ku soo jeeda Somalia waxa uu ku booriyey inay dadka rayidka taageeraan, isla markaana ay si hufan u gutaan Waajibaadkooda Hawlgalka AMISOM.
Wasiir Bahdoon waxa uu dabayaaqadii bishii October ee la soo dhaafay booqday Ciiddanka Jabuutiyaanka ee ku sugan magaalladda Beled-weyne, maalmo kadib, markii ay Dagaalamayaasha Xarakadda Alshabaab weerar is-qarxin ah la beegsadeen Ciiddanka Jabuuti ee fariisinka ku leh Beled-weyne.
Dowladda Jabuuti waxay sheegtay Is-qarxintaasi looga dilay 3 Askari, laguna dhaawacay dhowr kale, balse Afhayeenka Xarakadda Alshabaab ee dhinaca Hawlgalladda, Sheekh C/casiis Abu Muscab ayaa sheegay inay Tobaneeyo Askari Jabuutiyaan ku dileen, kuna dhaawaceen Qaraxii bishii October ka dhacay Saldhigga Ciiddanka Jabuuti ku leeyihiin magaalladda Beled-weyne.